Mogadishu Journal » ‘Allegriano’ – Pirlo ayaa ku faraxsan ka dib kulankii Inter
‘Allegriano’ – Pirlo ayaa ku faraxsan ka dib kulankii Inter
Juventus ayaa qaaday waddo wax ku ool ah oo ay ugu gudubtay finalka Coppa Italia oo ay la ciyaartay Inter, Andrea Pirlo wuxuu soo dhoweeyay isbarbardhiga Massimiliano Allegri.
Andrea Pirlo wuxuu ku faraxsanaa inuu dib ugu laabto mustaqbalka si uu u xaqiijiyo booskiisa finalka Coppa Italia ee Juventus iyadoo ay qarash gareyneyso Inter.
Juventus ayaa barbaro goolal la'aan 0-0 ah la gashay Talaadadii lugtii labaad ee semi-finalka, taasoo la micno ah in labo gool uu dhaliyay Cristiano Ronaldo kulankii ay 2-1 kaga badiyeen San Siro isbuucii hore.
Pirlo wuxuu isku dayay inuu keeno qaab ciyaareed balaaran oo Juve ah xilli ciyaareedkaan natiijooyin isku dhafan, laakiin aragtida funaanado madow iyo caddaan ah oo culeys saaraya iyadoo la fudeydinayo Gianluigi Buffon ayaa kicisay xusuus sannadihii ay joogeen tababarayaashii hore Massimiliano Allegri iyo Antonio Conte - kan dambe ayaa hadda jaraya shaqsi jahwareersan oo ku dhexjiray Inter.
Tababaraha Juve Pirlo ayaa u sheegay Rai Sports isbarbardhiga. “Haddii ay tahay inaan ku guuleysto waxa uu ku guuleystay, waxaad sidoo kale iigu yeeri kartaa 'Allegriano'.
Aad ayaan u fiicneyn, marna kuma aysan toogan goolka. ”
Pirlo ayaa ku amaanay Samir Handanovic inuu yahay ciyaaryahanka ugu fiican garoonka dhexdiisa goolhayaha Inter ayaana sameeyay badbaadinno cajiib ah qeybtii labaad si uu u carqaladeeyo Ronaldo.
Finalka ayaa sugaya Atalanta ama Napoli, oo Juve ku garaacday Supercoppa Italiana si ay u hesho koobkii ugu horreeyay ee xirfadda tababbarka embriyaha ee Pirlo.
“Waxay ahayd qorshahayga inaan ku guuleysto Supercoppa isla markaana aan gaaro finalka Coppa, laakiin waxaa jira shaqo in la qabto,” ayuu raaciyay.
Tababare ahaan gabi ahaanba waa ay ka duwan tahay sidii hore. Waan ku qanacsanahay ilaa iyo haatan laakiin wali waxba maanaan qaban. ”
Juve ayaa gaartay finalka Coppa Italia lix ka mid ah toddobadii xilli ciyaareed ee ugu dambeysay, iyadoo ku guuldareysatay inay sidaas sameyso kaliya 2018-19.
Pirlo's Juve ayaan laga badinin 11 ka mid ah 12 kulan oo ay ciyaareen tan iyo bilowgii 2021 tartamada oo dhan, iyagoo badiyay 10 ka mid ah kulamadaas (D1).
Dhanka kale, Juventus ayaan laga badinin sagaal ka mid ah 10kii kulan ee ugu danbeysay ee ay la ciyaareen Inter tartamada oo dhan, iyagoo badiyay lix kulan (D3).
Bob Menendez oo ka cabsi qaba in Dhiig ku daato Ismari waaga ka taagan Doorashada Soomaaliya